Dhibeewwan ka'umsa jaamummaa ta'an dhabamsiisuuf
Dhibeewwan ka'umsa jaamummaa ta'an dhabamsiisuuf Featured
Aadde Zayitunaa Abbaa Jabal jiraattuu magaalaa Jimmaa yoo ta'an, abdiidhaan mooraa istaadiyoomii xiqqicha magaalattiitti argamaniiru. Guyyaa qaroo addunyaa yeroo 12fa magaalichatti kabajamerratti tajaajila wal'aansa fayyaa ijaa, guyyaa kana sababeeffachuun tola kennamu abdatanii qaroosaanii deebifachuuf kan dhufan.
Akka isaan jedhanitti, duraan qaroonsaanii waan dhukkubuuf tajaajila wal'aansaa argatanillee deebi'ee fayyuu hindandeenye. Haala kanaan hanga tokko fooyya'iinsa haa qabaatu malee, imimmaan irraa qooruu hindandeenye.
Darbee darbees akka hooqsisu himu. Akka maanguddoon tun jedhanitti qulqullina naannawaafi dhuunfaasaanii kan eeggatan ta'us, naannawaansaanii bosonaa'aa waan ta'eef, namoonni balfawwan gara garaaachitti gatu.
Ogeessonni yeroo hedduu naannawasaanii akka qulqulleessan gorsuun, akkaataa gorsa kennaniifitti qulqullina naannawaafi dhuunfaa eeggatanus, namoonni balfa naannawaasaaniitti gatan to'achuu akka hindandeenyeefi fayyaasaaniif yaaddoo akka itti ta'eedha kan dubbatan.
Obbo Fiixaa Adamis akkasuma dhibee ijaa wal'aanamuuf dhufanii kan argineedha. Ijisaanii kunis akka jedhanitti fageenyatti malee dhiyeenyaatti kan hinargine ta'uu dubbatu. Kanaan dura dawaa fudhatanii itti fooyya'us, guutumnmaatti fayyuufi hindandeenye. Akka isaan jedhanitti, kunuunsi fayyaa ijaasaaniif taasisan akkaataa gorsa ogeessotiin yoo ta'u, qulqullina dhuunfaafi naannawasaaniis eeggachuu fayyaa qaroosaanii kunuunfachaa jiru.
Humnaafi dandeettii dhabuudhaan malee fayyaa qaroosanii eeggachuuf hawasni naannawasaanii gara dhaabbata fayyaa dhaquun kan wal'aanamuudha malee, bifaa aadaatiin wal'aamuufi dhibee biraatiif dabalataan of saaxiluurra hawaasni ofqusachaa akka jiru eeran.
Guyyaan qaroo addunyaa yeroo 12faf Magaalaa Jimmaatti wayita kabajametti daaw'annaafi dhukkubsattootaaf torban tokkoof kan turu tajaajila wal'aansa ijaa tolaan Hospitaala Jimmaafi buufataalee fayyaa gara garaatti geggeeffameera.
Kunis dhibeewwan ka'umsaa jaamummaa ta'an kanneen akka tiraakoomaa, mooraan haguugamuu qaroo, sirriitti qulqulleessanii arguu dhabuu, dhiibbaa ijaafi yeroo dhiyoo asis sababa dhibee sukkaaraatiin jaamummaa dhufan ittisuuf kan xiyyeeffateedha.
Akka ragaaleen mul'isanitti sababa ka'umsa dhibeewwan jaamummaa kanaan Itoophiyaatti lammiileen miliyoona 1.3tti dhiyaatan jaamummaaf saaxilamaniiru.
Ministeeraa Eegumsa Fayyaatti Gorsituu Dhimmoota Tekinikii Fayyaa Ijaa Aadde Tsahaaynash Kaasaa guyyaa kana akka jedhanitti, dhibeewwan kunneen hundi biyyattiitti jaamummaaf ka'umsa ijoo yoo ta'an, mooraan haguugamuun ijaa (%49.9)fi qulqulleessanii arguu dhabuun (%42.2) sadarkaa duraarratti kanneen eeramaniidha. Rakkoon kun sadarkaa kanaan babal'ataa kan jiruufi baay'inni ogeessota fayyaa haala duraan turerra dabalullee, lakoofsi kutaalee hawaasaa miidhamaniifi ogeessota walmadaalaa akka hinjirre dubbatu.
Akka ulaagaa Dhaabbata Fayyaa Addunyaatti namoota ijisaanii mooraan haguugame miliyoona tokko keessaa waggaatti namoonni kuma lama wal'aanamuu akka qabaniifi Itoophiyaan garuu, waggaatti namoota 742 kan wal'aantu ta'uu himan.
Ulaagaa dhaabbatichaatiin yoo walbira madaalamus ulaagaan jiruufi lakkoofsi wal'aanamtootaa gadaanaa akka ta'e dubbatanii, kanaafis ministeerrichi xiyyeeffannaa addaatiin kan hojjetu ta'uu eeran.
Hanqinni ogeessota dhibeewwan eeramanii akka jiru kan himan Aadde Tsahaaynash, sagantaa ijoo ministeerichi irratti hojjechaa jiru keessa ogeessonni jiran waggaatti namoota wal'aamuu danda'u jedhamee kaa'ame dachaan akka hojjetan gochuurratti xiyyeeffateera jedhan.
Akka biyyattiitti hojiileen eegumsa fayyaa bal'inaan kan hojjetaman ta'us hojiilee hojjetamaniifii rakkooleen jiran yoo walmadaalchifaman wantoonni hedduun kan hafan ta'uu kan duibbatan ammoo ministeerichatti gorsaa ministir de'eetaa, Obbo Girmaa Ashannaafiiti.
Akka isaan jedhanitti dhibeewwan ka'umsa jaamummaa ta'an dhabamsiisuuf tajaajila wal'aansa babal'isuufi gabbisa hubannoo hawaasaarratti xiyyeeffannaan hojjetamaa jira.
Keessumaa, naannawa hawaasa dhibee ijaa mooraan haguugameef saaxilamaniitti bifa duulaatiin dhabamsiisuuf kan hojjetamuudha jedhan. Kana malees, waliingahiinsaa tajaajila fayyaa qaroo fooyyessuuf ministeerichi qarshii miliyoona 21 ramadee sochiirra jiraachuu himan.
Walumaagalatti, dhibeewwan jaamummaaf ka'umsa ta'an dhabamsiisuuf hojiileen hojjetamaa jiran jajjabeessoodha. Ta'us, dhibeewwan kanneen guutummaatti dhabamsiisuufi saaxilamtoota dhibechaa bira ga'uuf hanqinni ogeessotaa jiru furmaata kan fedhuudha. Kana malees, gabbisaa hubannoo hawaasaafi bifa duulaan hojiileen hojjetaman cimanii ittifufuun hawaasaa qaroosaa dhabaa jiruu baraaruun murteessaa ta'a.
Torban kana/This_Week 43233
Guyyaa mara/All_Days 1468013